Daraasad Ka Wanaagsan, Natiijooyin Ka Wanaagsan: Qaabaynta Nidaamka Cilmi-baarista Teknolojiyada | Martech Zone
Cilmi-baaris Ka Wanaagsan, Natiijooyin Ka Wanaagsan: Qaab-dhismeedka Nidaamka Cilmi-baarista Cilmi-baarista
Khamiis, May 14, 2020 Khamiis, May 14, 2020 Douglas Karr
Qeexid waa madal cilmi baaris suuq ah oo otomaatig ah waana mid ka mid ah kuwa adduunka oo keliya gacanta ku haya oo si gaar ah loogu horumariyo otomaatigga dhammaan geeddi-socodka cilmi-baarista.
Barxadku wuxuu ufududeynayaa uguna dhakhsaha badanyahay shirkadaha si ay uhelaan fikradaha macaamiisha ee muhiimka ah marxalad kasta oo ka mid ah horumarinta wax soo saarka iyo habka suuqgeynta si loo gaaro go'aanno ganacsi oo wanaagsan. Markaan hal talaabo horey usii qaadno, Methodify waxaa loogu talagalay inay ahaato mid la beddeli karo, iyadoo siineysa shirkadaha jawaab celinta macaamiisha nooc kasta oo badeecad ah, suuqgeyn ama su'aal khibradeed - xitaa kuwa aysan weli ka fikirin.
Qeexid ayaa looureeyay iyadoo lagu gudajiro baaritaanka fikirka soo noqnoqda bangiga ugu weyn Kanada. Kooxda Methodify waxay la tacaashay caqabadda ka caawinta inay ka sameeyaan cilmi baaris badan oo macaamiil ah iyagoo si dhakhso leh u keenaya jawaab celin tayo sare leh.
Bangiga waxaa la soo dersay arimo caadi u ah shirkadaha maanta — waqti xaddidan oo muhiim ah ayaa loo rogayaa alaabada iyo ololeyaasha hareeraha, ilaha yar ee lala shaqeynayo iyo miisaaniyada dhimista badan. In kasta oo ay doonayeen in lagu daro aragtiyo badan oo macaamiil ah inta badan hawshooda, waxay kaloo ogaayeen fikradaha soojireenka ah, xayeysiinta iyo tijaabinta xirmada xirmooyinka oo ay ku lug lahaayeen daraasado cilmi baaris oo aad u adag oo gaabis ah oo qaali ah.
Aynu dul dhigno xoogaa macno ku saabsan tan: ururadu waxay rabaan go'aanno dheeri ah oo lagu taageerayo xogta, iyaga oo cadaadis weyn saaraya kooxdooda cilmi-baarista iyo xogta falanqaynta. Waanan ognahay in culayska urur oo dhan la dul dhigo shaqaale faro ku tiris ah inay tahay mid loogu talagalay musiibo.
Tani waxay markaa u horseedaa kooxaha suuq-geynta qaadashada toobiyeyaasha iyo adeegsiga aaladaha cilmi-baarista sida doorashooyinka Facebook si loo helo jawaab-celinta macaamiisha. Farsamooyinkaan DIY-ga ah inta badan waxaa ka mid ah doorashooyinka aan cilmiyeysneyn, kuwaas oo wiiqaya hababka cilmi-baarista ee la caddeeyey, tixgelinaya shuruudaha dadka iyo kordhinta halista eex iyo su'aalaha horseedka ah.
Halkii la isku dayi lahaa in la hareer maro habraaca cilmi baarista sayniska, Methodify waxay dooneysaa inay ka caawiso magacyada inay diirada saaraan dadaalkooda ku aadan ka qeyb qaadashada macaamiishooda inta ay socoto howlaha wax soo saarka iyo suuqgeynta.
Si wax looga qabto caqabadahaas, Qeexid waxaa loogu talagalay inay noqoto madal:
Waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay horay u tijaabiyaan inta badan (qaadashada habka imtixaanka-iyo-barashada ee keena natiijooyinka dhakhsaha badan-oo aan sugin wax weyn oo muujinaya bil kadib);
Macaamiisha u keenta wadahadalka marxalad kasta oo ka mid ah horumarinta wax soo saarka iyo suuqgeynta;
Waxay adkeysaa habraaca cilmi baarista.
Sida loo adeegsado Habka loo gaaro Hadafyada Muhiimka ah
Si aad u siiso awoodda aad ku tijaabiso marar badan, Qeexid waxaa lagu dhisay falsafad dhaqso badan. Habka asaasiga ah ee loo yaqaan 'Methodify' wuxuu hubiyaa natiijooyinka cilmi-baarista degdegga ah ee qiime qiimo leh. Nidaamyada shirkaddu waxay u fidiyaan ROI ka wanaagsan suuqleyda iyo kooxaha fahanka, iyaga oo ku quudiya iyaga oo adeegsanaya jawaab celin macaamiil ah iyada oo loo marayo gaagaaban, 5-10-daqiiqo oo sahan ah oo ka soo horjeedda sahaminta dhaqameed ee 45-daqiiqo oo toddobaadyo ku qaadanaya natiijooyinka.
Si loo adkeeyo habraaca cilmi baarista, iyagaa madow feedh habab la xaqiijiyay oo ay qoreen cilmi baarayaal la aqoonsan yahay. Qaabka su’aalaha loo weydiiyo, sida ay u kala horreeyaan; cidina ma beddeli karto habkaas. Tani waxay xaqiijineysaa jaangooynta iyo algorithms inay ahaato mid joogto ah. Si kastaba ha noqotee, summad ayaa codsan karta in la furo oo wax laga beddelo habka, iyada oo la abuurayo qaab cusub oo nadiif ah oo ku saabsan barxadda. Kaliya astaanta ayaa awood u leh inay gasho qaabkan cusub.
Daraasad Kiis ah Qaab-dhismeed
Mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee iibinta 'whiskey', JP Wiser's, oo ay soo saaraan Corby Spirit iyo Wine Limited, ayaa loo adeegsaday Methodify si ay uga caawiso naqshadeynta iyo turxaan bixinta mid ka mid ah ololayaasha shakhsiyadeed ee ugu sarreeya ee weligood lagu bilaabay warshadaha khamriga - Ku Hay Sare, taas oo dadka siisay fursad ay iskula dubtaan si aad u ballaaran .
Bilowgii qorshaynta ololaha, JP Wiser wuxuu aasaasay koox ay kujiraan wada-hawlgalayaal hay'adeed oo ka kala socda dhinacyo kala duwan iyo - dunta lagu tolay geeddi-socodka qorshaynta ololaha — tijaabintooda iyo ka-habeynta qaabkeeda, Methodify.
Ugu dambeyntiina, calaamaddu waxay dooneysay inay ku dhiirrigeliso reer Kanadiyaanka waddanka oo dhan inay isku waqti iyo daryeelba u yeeshaan saaxiibtinimadooda sidii ay ugu shubteen whiskey-koodii Si taas loo sameeyo, kooxdooda wakaaladda ahi waxay hindisay fikradda ah inay soo saaraan ololihii ugu horreeyay ee si guud loo adeegsado ee loogu talagalay JP Wiser, iyagoo macaamiisha u siinaya fursad ay si cad ugu muujiyaan asxaabtooda boorarka, raadiyaha, iyo warbaahinta bulshada. Iyaga oo aan ogayn nooca rooga ay heli doonaan iyo kanaalada sida ugu fiican ugu gudbin kara tan, waxay hawlgeliyeen 'Methodify' si ay u sameeyaan tijaabooyin iyo habeyn taas oo hubinaysa in ololuhu uu ahaa mid guuleystay. Adoo adeegsanaya Methodify si aad codka macaamiisha ugu keento badanaa inta lagu jiro horumarka, ololaha ayaa ugu dambeyntii ahaa loogu talagalay macaamiisha, macaamiisha.
Maaddaama natiijooyinka lagu bixin karo 1-2 maalmood gudahood, hay'ad kasta oo shuraako ah waxay awood u yeelatay inay si toos ah ugu biiriso jawaab celinta macaamiisha qorshayaashooda. Halkii laga hor istaagi lahaa horumarka hal abuurka, cilmi-baaristu waxay halkii ka noqotay ficil ahaan.
Tijaabada Cilmi Baadhista Suuqa Oo Ay Ku Jirtay
Imtixaanka Territori: Waxaa la tijaabiyay dhulal kala duwan oo hal abuur leh si loo go'aamiyo jihada ugu badan ee la jaanqaaday suuqa bartilmaameedka
Tijaabinta Fulinta Xeeladeed: Waxaa la baaray taaktikada ka jirta dhulka guushu ay aadka u doonaysay bartilmaameedku, Ingiriis iyo Faransiisba.
Isticmaalka madal dhaqaaqa sida Qeexid si go'aan looga gaadho inta lagu guda jiro hawsha suuq-geynta waxay siisay kooxda suuqgeynta ee JP Wiser's macluumaad laga yaabo in aysan ku tijaabin macaamiisha si kale. Tusaale ahaan, iyagu ma ay tijaabin lahaa dhulalka fikradda ka hor intaanay ka hawlgalin madal cilmi baaris suuqa, laakiin tani waxay noqotay mid muhiim ah maadaama go'aan qaadayaasha muhiimka ah ee Corby ay ku kala qeybsameen dhulalkii ugu horreeyay ee la soo bandhigay. Waxay sidoo kale gacan ka gaysatay mudnaanta mudnaanta khadka tooska ah, qadka iyo khibradaha loo adeegsado ololaha iyadoo lagu saleynayo jawaab celinta macaamiisha.
Ololaha iyo sumadda waxaa loo arkaa isbeddello koritaan xoog leh natiijada, laakiin natiijooyinka ugu macnaha badan waxay ka yimaadeen sheekooyinka shaqsiyadeed iyo saameynta ay sumaddu ku yeelatay xiriirada dadka. Laga soo bilaabo soo-jeedin ku saabsan boorarka ku yaal Toronto illaa rootiga tooska ah ee xudduudaha ee saaxiibtinimada Mareykanka iyo Kanada, oo ay ku lug leeyihiin dadka 50 ee labada dhinac ee soohdinta Detroit, Michigan iyo Windsor, Ontario, oo ah guriga JP Wiser.
Methodify Kala duwanaanshaha
Waxaa jira afar meelood oo Methodify u taagan yahay marka laga reebo tartamayaasha:
Waxaa jira baahi cad oo loogu talagalay barxad cilmi baaris oo internetka ah oo bixisa heer isku mid ah oo xoog leh sida xog ururinta caadada ah iyadoo sidoo kale la siinayo is-dhexgal sahlan oo loo adeegsado sida kuwa badan ee xalka maanta jira.
Awood u lahaanshaha barnaamijyada shirkadaha;
Maaddaama mid ka mid ah kuwii hore ugu soo galay suuqa otomaatiga, Methodify ay dejineyso heerar isla markaana ay hal-abuureyso mustaqbalka baaritaanka suuqa iswada;
20-sano jir ku abtirsada warshadaha udhaxeeya shirkada heysata Methodify, Delvinia, iyo AskingCanadians, gudiga xog aruurinta qadka.
Ballanqaadka cilmi-baarista iyo horumarinta si loo sii wado casriyeynta iyada oo loo marayo shirkadda waalidka, Delvinia.
Diyaar ma u tahay inaad waxbadan barato?
Saxiix U Soo Bandhig Demo
Tags: bangiyadaBMOfintechcilmi baarista fintechjd caqli badanmadal cilmi baarista suuqahabayncilmicilmi baaris
Sida loo cadaadiyo faylka PDF-ka Adobe
TinEye: Raadinta Sawirka gadaal